Yithi ndlela-ntle kwi-Android 8 ukusuka kwiziphumo zophando lukaGoogle | Iindaba zeGajethi
Siya ukuntywiliselwa kwi-Android 7.0 kwaye loo minqweno kutheni Ukuhlaziywa kweNougat kuyafika kwizixhobo zethu emva kokuba ibhengeziwe kwakwiminyaka eyadlulayo kwaye ukusukela entwasahlobo sasinayo kwifom ye-beta kunye nomboniso wonjiniyela we-Android N.
I-Android 7.0 iya kunika indawo, ekucingelwa, ukuba yenze i-Android 8.0, ekucingelwa ukuba nayo, iya kuba no "O" njengonobumba wokuqala wegama layo. Into ehlekisayo ngale Android 8 kukuba xa usenza uphando, Umdlalo we-Dragonball we-Android awuyi kuvela njengokuba isenzeka ngoku.
I-Android Nº8, yaziwa eSpain njengo "Super 8" okanye kwiLatin America njengo "Octavio", Ngomnye wabalinganiswa kuthotho olukhulu lweKhathuni okanye ibhola yedragini. Le yenye yeentshaba zikaGoku kwaye yadalwa njengenye yezixhobo eziyimfihlo zeRibhoni ebomvu. I-Android eyenzelwe ukhathalelo lokhuseleko lweMuscle Tower.
Ukuba wenza ukukhangela "i-Android 8" kuGoogle ngoku, i-Super 8, i-Octavio okanye i-Android 8 ezihluphekileyo ziya kuvela "kwimifanekiso". akanayo iinyanga ezishiyekileyo yobomi ukuze ubekhona njengokuba kusenzeka ngale mizuzu.
Abanye basenokuthi bayaziqhela biza ingxelo entsha kaGoogle ngegama, kodwa i-Android 5.0 okanye i-Android 6.0 zihlala ziyile nto siyibiza ngayo ukuze ekugqibeleni siphume.
Inqaku elinomdla elingenanto ongayikhankanya Phantse ukungcwaba loo Android inkulu Yenziwe nguGqirha Gero kunye noGqr Flappe kwaye imele ukuba namandla angaphezulu kakhulu, ubukhulu obukhulu kunye nomzimba obonakala ngathi uyoyikisa. Ndiyathemba ukuba i-Android 8.0 iyahamba kwaye ithetha enye indlela esemgangathweni esemgangathweni njengoko uhlaziyo lwamva nje lwe-Android luye lwenzeka.
Ngoko ke, ubuso be-frankstein obuhlwempuzekileyo buza kunyamalala yenjini yokukhangela kuGoogle apho, ukuba awubonakali, phantse ngathi awukho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Umcimbi wexesha ngaphambi kokuba sithi ndlela-ntle kwi-Android 8 kwiziphumo zokukhangela
Ikhamera emibini ye-iPhone 8 Plus iya kuba nokuzinzisa okuphindiweyo